10-Kamid Jilayaasha Bollywoodka Ee Jirkooda U Bedeleen Doorka Filmkooda Dartiisa (+Sawiro) | Filimside.net
Home » Nolosha Jilaayaasha » 10-Kamid Jilayaasha Bollywoodka Ee Jirkooda U Bedeleen Doorka Filmkooda Dartiisa (+Sawiro)
10-Kamid Jilayaasha Bollywoodka Ee Jirkooda U Bedeleen Doorka Filmkooda Dartiisa (+Sawiro)
Jilayaasha Bollywoodka sameenta filmada dhib badan ayee ka maraan halka daawadyaasha si raaxo leh ku daawadaan fariinta filmka laga soo dhigay.
Waxaa jiraan jilayaal fara badan kuwaaso dhib badan u maraan sidii ay doorkooda shaashada kaga dhabeen lahaaeyn waxayna sameeyan marna miisaankooda ayee sare u qaadaan marna miisaankooda ayee dhiman.
Jilayaashas shaashada horteeda kaga dhabeenayaan doorka waxaa kamid ah Aamir Khan, Hritik Roshan, Rajkumar Rao iyo kuwa kale waxayna sameyeen doorar ay u bareeran dadaal fara badana u bixiyaan.
Fadlan Halkaan Hoose Kaga Bogo 10-kamid Ah Jilayaasha Bollywoodka Ee Door Dartiisa Jirkooda Is Bedel ugu Sameyeen..
Super Star Hritik Roshan filmkiisa Gzaarish waxuu ku jilaa qof miisankisa culus inyar sido kalena kursiga curyaamiinta ku fadhiya waxuuna mashruucan dartiisa sare ugu qaaday miisaankisa oo uu kordhiyay balse 10 todobaad kadib filmka ayuu hadana miisaankisa sidii hore ka dhigay oo uu dhimay waana jilaa kaga dhabeyay shaashada.
Dangal waxuu ku jilaa marka hore qof dhisan oo miisaankisa yaryahay oo hadana la qeyb qaadanayaa ciyaarta lagdanka sida aad bilawga filmka ku arkeyso balse marka uu ku guda jiro koriismada gabdhaha waa oday calool leh miisaankiisana weynyahay waxuuna ka maray dhib badan marna miisaankiisa ayuu sare u qaadayey marna hoos ayuu u dhigayay Aamir mashruucan.
Sidharth si uu oga dhabeeyo doorkisa filmka Brother miisaankiisa ayuu sare u qaaday isagoo murqo waa weyn sameestay balse mashruucas kadib ayuu sidiisi hore iska dhigay hadana oo uu miisaankisa dhimay.
Abhishek Bachchan filmkiisa Guru qaab jiliin ahaan wuu u cadaalad falay waxuuna miisankisa ku daray in badan taaso uu markii dambe ku dhibtooday siduu isaga dhimi lahaa inkastoo uu ku guulestay.
Farhan oo ah heesaa, film sameya iyo atoore waxuu sameyay filmka Bhaag Milkha Bhaag kaaso uu tabobar weyn uu u galay si uu doorkisa filmka kaga dhabeeyo waxuuna miisankisa kudaray in badan isagoo jirkiisa dhistay sido kalena horey uu u ahaa qof iska caato ah.
Lasoco qeybta xigta….
Waxaa Aqrisay 1,978